NepalManch :: कति छ श्रममन्त्री किसानको सम्पत्ति ?
कति छ श्रममन्त्री किसानको सम्पत्ति ?
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ ले मन्त्री नियुक्त भएको चार दिनभित्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा २६ करोड भन्दा बढिको सम्पत्ति देखाएका छन् भने दाइजोमा लिएको २० तोला सुन सहित ७० तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन् । योसमेत उनीसँग कुल ७० तोला सुन रहेको छ, जसको अहिले बजारमूल्य ६३ लाखभन्दा बढी हुन आउँछ ।
त्यसैगरी उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंका तीन स्थानमा जग्गा छन् । ती जग्गाको खरिद मूल्य श्रेष्ठले विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका–९ मा कित्ता नम्बर ११४, ०–८–०–० क्षेत्रमा भएको जग्गा उनले ७४ लाख ७५ हजार २५६ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेका थिए ।
त्यस्तै काठमाडौं–३ मा कित्ता नम्बर १०८, ४२९.१४ क्षेत्रमा रहेको जग्गाको खरिद मूल्य ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने काठमाडौँ–१ मा कित्ता नम्बर २१५१, २१५२, २२२७ र २४९४, ०–८–३–३ क्षेत्रमा रहेको जग्गाको खरिद मूल्य ६९ लाख रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्री श्रेष्ठका काठमाडौंमै दुईवटा घर छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका–३ मा साढे दुई तलाको घर छ भने काठमाडौँ–९ धापासीमा सात तलाको व्यवसायिक घर रहेको छ । हाल मौज्दातमा रहेको घर तथा जग्गा जम्मा नौ करोड ६९ लाख ७३ हजार ५० रुपैयाँ मूल्य बराबरको रहेको उल्लेख छ ।
उनले विभिन्न कम्पनीमा दुई करोड १७ लाख, २४ हजार ४०० मूल्य बराबरको सेयर लगानी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, उनले २० वटा व्यावसायिक कम्पनीहरुमा १४ करोड ५६ लाख २६ हजार मूल्य बराबरको लगानी गरेका छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्री श्रेष्ठले भने चार दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आईसीएफसी फाइनान्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा
काठमाडाैं उपत्यकामा आजदेखि नयाँ भाडादर लागू, कहाँ जान कति तिर्नुपर्छ ?
आज कति मूल्यमा हुँदैछ सुनचाँदीको काराेबार ?
कोरोना संक्रमितको बिमा दाबी कहिले भुक्तानी हुन्छ ? के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?